Weneka inhliziyo yakhe ngoFelix Hlophe | News24
Weneka inhliziyo yakhe ngoFelix Hlophe
Durban - Imvamisa uma ngike ngakhuluma ngigxeka, abantu baye bathi ngigxekiswa ukuthi nginomona.
Akusilo iqiniso lelo, inkinga yabantu ukuthi abafuni ukusolwa bafuna njalo ukuhlala beshayelwa ihlombe noma bebheda.
Namhlanje-ke uzophoxeka uma ubuze ngengqondo yokuthi ngizogxeka, ngize ngesihle futhi ngikhasa ngamadolo ngizozeneka ngothando engiluzwa ngaphakathi.
Kusukela kushintshe izinhlelo eGagasini FM, njengoba bekwenzelwa amaholidi, angicabangi ngalutho olunye ngaphandle kukaFelix Hlophe.
Akasiyo indoda esingathi ibukeka kahle ebusweni kodwa awu, uyawuthinta umoya wami.
Unezwi elimnandi nomqondo ongajwayelikile. UFelix ungamfanisa noCurry Powder okuyiwo oyolisa ukudla.
Funda nalolu daba: USipho noZama bangikhumbuza uSbonga no-Alex
Ungapheka ukupheka kodwa uma ungazifakanga izinongo, udlala ngesikhathi.
Abasakazi abaningi beGagasi bayawazi umsebenzi kodwa umbuzo uthi bangaki abangena ohlelweni babeyisinongo njengoFelix?
UFelix uyilokhu okungenza ekuseni ngivuke noma kungavukeki ngithi angeke ngiphuthwe yileli lizwi.
Uyitufutufu elithandekayo futhi uqaqeke kangangoba ungamfaka elokishini afithe kolova, umfake esilungwini aphinde akwazi ukuziphozishina.
UFelix udinga ukuthi uhlakaniphe kwawena kuze uzomuzwa ukuthi ukhaliphile.
IGagasi bese ngingalilaleli ekuseni kusukela kwashintshwa abasakazi kodwa kamuva njengoba ngilalela uFelix ekuseni, ungenza ngizibuze ukuthi yini eyenza kube khona abantu aba-ordinary naba- extra ordinary?
Felix baba usohlwini lwaba-extra ordinary, ulunge unjengoba unjalo, konke ukwenza kamnandi ungenza ngifise ukukwazi kangconywana, bengifisa sengathi bengangakushintsha kulolu hlelo obanjiswe lona.
Nakanjani ngingakhuluphala njalo ngizovukela kuwena, angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi ubusisiwe owesifazane ozwa izwi lakho ekuseni lisagcwele ubuthongo, uvuka aphinde alizwe usuzela ebusuku.